crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Faallooyinka | HimiloNetwork
Himilo May 16, 2022	Leave a comment 89 Views
MUQDISHO (HN) — Kuma cusba dhegaha dadka magaciisu. Muuqiisana haba sheegin. Siyaalo dhowr ah oo kala duwan ayuu uga qeyb ahaa geeddi-socodka nolosha rayidka siiba dhanka wax-barashada iyo hey’adaha. Laakiin wuxuu mar qura saaxadda caannimada iyo hadalheynta qabsaday 10 sannadood kahor. Waana halka ay kasoo bilaabato waaya’aragnimadiisa madaxtinimada Soomaaliya. Sannadkii 2012-ka, doorasho ay ku loolameen isaga iyo Shariif Sheikh Axmed ...
Soonku waa Samafal iyo Sahayda oo la badsado!
Himilo April 24, 2022	Leave a comment 120 Views
MUQDISHO (HN) — Bisha Ramadaan waa bil bilaha kale oo dhan uga duwan is-beddelka ay la timaado taas oo ay ugu weyn tahay ka soomidda cunnada iyo cabitaanka iyo aqriska Qur’anka iyo badinta acmaasha wanaagsan oo dhan. Dad badan waxay doorbidaan inay in yar ka shaqeeyaan; in bandanna ka nastaan si ay uga gaashaantaan oonka iyo harraadka maalinkii oo dhan. ...
Faallo iyo Falanqeyn: 3 Qodob oo Soomaaliya ka Caawin kara ku Guulaysiga Dacwadda Badda.
Himilo March 18, 2021	Leave a comment 566 Views
MUQDISHO (HN) — Feb 02, 2018: – Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay ayaa go’aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Garsoorayaasha Maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska, ka dib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya. June 25, Maxkamada ICJ ayaa mudeeysay in 9ka ilaa 13ka bisha ...
Himilo March 16, 2021	Leave a comment 195 Views
MUQDISHO (HN) — As the number of those infected and the death toll of Covid-19 patients are in increase simultaneously, the government failed to save the health system from total collapse. The Banadir local authority partially shut down the city to contain the disease and that didn’t stop the situation from worsening. An estimated 99% of government-run hospitals with intensive ...
Himilo August 11, 2020	Leave a comment 955 Views
MUQDISHO (HN) — Waayihii adkaa oo ay hooyaday noloshayda kasoo martay marwalba oo aan xusuusto, waxaa sidoo kale ii sawirma sawir qurux badan oo ay nolosha aabbahay iiga sheegi jirtay. Kahor intaanu af-gembiga dhicin, aabbahay wuxuu ahaa da’yar goor hore oo noloshiisa kamid ah ku guuleystay inuusan kaliya maareyn nolosha qoyskiisa iyo tan waalidkiisa, balse sidoo kale ku guuleystay inuu ...
Qisada ka danbeysa Qalin-jebintayda Jaamacadda.
Himilo January 17, 2020	Leave a comment 1,501 Views
MUQDISHO (HN) — Toddobaad kaddib oo laga joogo markii aan difaacday Buugaygii Jaamacadda, waxaan wali il gacaltooyo leh kusii eegayaa sannadihii wacnaa oo joogitaanka Jaamacaddu iiga dhignaa wax walba taa oo si aan gunteeda u xaqiijiyo darteed wax kasta ugu bareeray. Waayo qalin-jabintayda laf ahaanteeda ayaa sharixi karta wax walba oo ku saabsan wax-barashadayda Jaamacadda. Sannadkii 2011 markii ugu horreysay ...
Xusuus Togan – 11 sano kaddib Geeridii Hooyaday.
Himilo January 15, 2020	Leave a comment 1,095 Views
MUQDISHO (HN) — Maanta oo kale 14 Janaayo 2009, waxaa subax iigu waabariistay farxad iyo maalin caadi ah uu gabbalkeedu iigu dumay murugo iyo uur-ku-taalo. Goor duhur ah ayaa la iisoo sheegay Dhimashada Hooyaday oo aan muddo sannad ku dhow arag. Waxaan ahaa arday ku jira sannadkii ugu danbeeyey dugsiga dhexe oo walaalkiis – dhawaantaa guursaday – kula nool magaalada ...
‘Dhalinyarada dulman’ – Oraah marin habaabineysa Da’yarteenna.
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 967 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waxaa innagu badan oraahda ah ‘dhallinyaradu wey ku dulmantahay siyaasada maadaama aan xil loo dhiibin ama koonta xaddidan oo xoogan aan laga dhex siin baarlamaanka wadanka’, sidoo kale waxaa aad u badan dhallinyarada ay saameyn ku yeelatay kalimaddaas oo daba hingaadsha dhawaaqyadaas dulmiga loo ekeysiiyay. Maddiidani in dhallinta ey dulmantahay eyna kala simantahay muwaadiniinta kale ee dalka, ...
Soomaaliya – Dal Dihan; Dadkiisuna Dawarsadaan!
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 706 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Soomaaliya waa dal dhaca Geeska Afrika kaasi oo xudduud ahaan la wadaaga dalalka Itoobiya, Jabuuti, Kiinya iyo Badweynta Hindiya. Soomaaliya waa dalka 2aad ee ugu xeebta dheer qaaradda Afrika, dhulka ayaa u qeybsama deegaanno sare, dhuldaaqsimeed iyo buuroley, Cimilo ahaan waddankeennu waa mid diiran sannadki oo idil, inkastoo ay soo dhacaan dabeylaha monsoonku iyo roob aan joogto ...
Dhallinyaradu waa is-beddelka Bulsho kasta!
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 867 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Marka aan dib ugu noqono taariikhda aadanaha, dawrka dhalinyarada ee isbedelka bulshada waxa uu ahaa mid muuqda. Waxay ka qayb qaadan jireen hawlaha dadweynaha sida dhaq-dhaqaaqyadii xorriyad raadinta, welina bulshooyinka caalamka waxa ay ku leeyihiin kaalin durugsan. Inkastoo dalal badan ay hoos u dhigeen kaalintii dhalinyarada sida inay xilal ka qabtaan kolba maamulka dawliga ah ee jira, ...
Arigii Dhogor awgii looga diday sida Dugaag.
La kulan – Ninka ugu dheer AFRIKA.
Mushkiladda heysata Qoysaskeenna Yurub ku nool.
Markay lamaanuhu kala aamusaan muddo 20-sano ah – maseyr dartiis!